Ebe nchekwa Fedora 35 - LinuxCapable
Wụnye Pantheon Desktop Environment na Fedora 35
Mọnde, Jenụwarị 17, 2022 by Jọshụa James
Gburugburu Desktọpụ Pantheon bụ n'efu, dị fechaa, ngwa ngwa na gburugburu desktọpụ mara mma nke pụtara ìhè n'etiti ọtụtụ ndị asọmpi ya na mpaghara a. Pantheon bụ ọnọdụ desktọpụ egosipụtara nke ọma maka elementrịOS, na-enweta mmụọ nsọ site na macOS wee jikọta ya na otu n'ime desktọpụ kachasị mma na-adọrọ adọrọ gburugburu na…
Categories Fedora Tags Fedora 35
Otu esi etinye Linux Kernel 5.17 na Fedora 35
Maka ndị ọrụ Fedora, ọtụtụ ngwungwu fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe dị ugbu a yana nkewa dị ka ihe kwụsiri ike. Agbanyeghị, mgbe a bịara na Kernels, ndị ọrụ na-achọkarị ịnwale onye ntọhapụ ọhụrụ na-enweghị ịgbanwee na Fedora Rawhide na inwe sistemụ anaghị akwụsi ike. Na Fedora na-aghọwanye ewu ewu…
Categories Fedora Tags Fedora 35, Linux kernel
Otu esi etinye ModSecurity 3 & OWASP Core Set na Nginx na Fedora 35
Thursday, January 13, 2022 Tuesday, January 11, 2022 by Jọshụa James
Categories Fedora Tags Fedora 35, Modsecurity, NGINX
Otu esi etinye LEMP Stack na Fedora 35
Wenezdee, Jenụwarị 12, 2022 Tuesday, January 11, 2022 by Jọshụa James
LEMP bụ mkpokọta ngwanrọ mepere emepe nke a na-ejikarị eje ozi ngwa weebụ. Okwu LEMP bụ acronym na-anọchi anya nhazi nke sistemụ arụmọrụ Linux nwere Nginx (akpọ engine-x, ya mere E na acronym) sava weebụ, yana data saịtị echekwara na MySQL ma ọ bụ MariaDB nchekwa data yana ọdịnaya siri ike nke PHP na-ahazi. ya bu…
Categories Fedora Tags Fedora 35, ỤLỌ
Otu esi etinye Cockpit na Fedora 35
Tuesday, January 11, 2022 by Jọshụa James
Cockpit bụ onye njikwa ihe nkesa dịpụrụ adịpụ n'efu nke dị fechaa ma dịkwa mfe iji maka sava GNU/Linux. Cockpit bụ ihe onyonyo dabere na webụ maka sava ezubere maka ndị ọhụrụ na Linux na ndị ọkachamara dịka sysadmins. Cockpit na-eme ka a chọpụta Linux, na-ahapụ onye ọ bụla na-eji ngwanrọ ahụ ịrụ ọrụ dị ka akpa akpa,…
Categories Fedora Tags Cockpit, Fedora 35
Otu esi etinye SQLite 3 na Fedora 35
SQLite bụ sistemu njikwa nchekwa data dị n'efu (RDBMS) n'ọbá akwụkwọ C. SQLite abụghị igwe nchekwa data nke ndị ahịa. Kama, etinyere ya na mmemme ngwụcha. N'ụzọ bụ isi, asụsụ mmemme niile na-akwado SQLite, nke otu asụsụ si etinye mmemme bụ faịlụ nwere ndọtị .sqlite3/.sqlite/.DB. Akụrụngwa bụ…
Categories Fedora Tags Fedora 35, SQLite 3
Otu esi etinye MariaDB 10.6 na Fedora 35
Tuesday, January 11, 2022 Tuesday, January 11, 2022 by Jọshụa James
MariaDB bụ otu n'ime ọdụ data mepere emepe kachasị ewu ewu n'akụkụ onye malitere MySQL. Ndị okike mbụ nke MySQL mepụtara MariaDB na nzaghachi maka egwu na MySQL ga-abụ ọrụ a na-akwụ ụgwọ na mberede n'ihi Oracle nwetara ya na 2010. Site na akụkọ ihe mere eme nke ime ụdị usoro ahụ, ndị mmepe n'azụ MariaDB ekwela nkwa idobe ya oghe isi ...
Categories Fedora Tags Fedora 35, MariaDB
Otu esi etinye ClamAV na Fedora 35
ClamAV bụ ngwa ngwanrọ na-emepe emepe na enweghị ike ịchọpụta ọtụtụ ụdị sọftụwia ọjọọ, gụnyere nje, trojans, malware, adware, rootkits, na ihe iyi egwu ndị ọzọ. Otu n'ime isi ojiji nke ClamAV bụ na sava ozi dị ka ihe nyocha nje ozi email n'akụkụ nkesa ma ọ bụ jiri na sava nnabata faịlụ ka…
Categories Fedora Tags ClamAV, Fedora 35
Page1 Page2 ... Page5 Osote →